Sefania 1 AKCB - Софония 1 CARSA
1Awurade asɛm a ɛbaa Sefania a ɔyɛ Kusi ba, Gedalia ba, Amaria ba, Hesekia ba nkyɛn ni. Ɛbaa Yudahene Yosia a ɔyɛ Amon ba no bere so.
Atemmu A Etia Yuda
2“Mɛpra biribiara afi asase so”
nea Awurade se ni,
3“Mɛpra nnipa ne mmoa nyinaa;
mɛpra nnomaa a wɔwɔ wim
ne mpataa a wɔwɔ po mu nyinaa.
Atirimɔdenfo benya wura a esum hɔ nko ara,
sɛ mesɛe adesamma a wɔwɔ asase yi so a,”
4“Mɛteɛ me nsa wɔ Yuda
ne wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa so;
na mɛsɛe Baal ho biribiara a aka wɔ ha,
na masɛe abosonsomfo ne akɔmfo asɔfo no din
5wɔn a wɔkotow sɔre wɔn adan atifi,
de sɔre abɔde a ɛwɔ wim,
wɔn a wɔkotow de Awurade ka ntam
na wɔde Molek nso ka ntam,
6wɔn nso a wogyae Awurade akyidi
na wɔnhwehwɛ Awurade anaa wommisa nʼase.”
7Monyɛ komm wɔ Asafo Awurade anim,
efisɛ, Awurade da no abɛn.
Awurade asiesie afɔrebɔde;
wadwira wɔn a wato nsa afrɛ wɔn no ho.
8“Awurade afɔrebɔ da no,
ne wɔn a wɔhyehyɛ
ananafo ntade nyinaa aso.
9Saa da no mɛtwe wɔn
a wɔkwati apongua no nyinaa aso.
Wɔn a wɔde akakabensɛm
ne asisi hyehyɛ wɔn abosomfi amaama no.
10“Saa da no,”
sɛnea Awurade se ni,
“Osu befi Mpataa Pon ano,
agyaadwotwa befi Atenae Foforo
na nnyigyei a ano yɛ den afi nkoko no so aba.
11Muntwa adwo, mo a mote adetɔnbea hɔ no
wɔbɛtɔre wɔn a mo ne wɔn di gua ase,
dwetɛ aguadifo nyinaa nso wɔbɛsɛe wɔn.
12Mede akanea bekyin ahwehwɛ Yerusalem mu
na matwe wɔn a wogyaagyaa wɔn ho aso,
wɔn a wɔte sɛ bobesa puw no,
a wodwen se, ‘Awurade renyɛ hwee
sɛ ɛyɛ papa anaa bɔne no.’
13Wɔbɛfom wɔn ahonyade,
na wɔabubu wɔn afi agu.
Wobesisi afi, nanso wɔrentena mu
wɔbɛyɛ bobe mfuw
nanso wɔrennom mu nsa.”
Awurade Da Kɛse No
14Awurade da kɛse no abɛn,
abɛn na ɛreba ntɛm so.
Tie! Osu a wobesu Awurade da no bɛyɛ yaw,
ɔkofo a ɔwɔ hɔ nso nteɛmu bɛyɛ saa ara.
15Saa da no bɛyɛ abufuw da,
ɛyɛ ahoyeraw ne ɔyaw da;
ɛyɛ amanehunu ne ɔsɛe da,
ɛyɛ esum ne kusukuukuu da
ɛyɛ omununkum ne kusuuyɛ da,
16ɛyɛ ntorobɛntohyɛn ne ɔko nteɛmu
a etia nkuropɔn a ɛwɔ bammɔ
ne ntwɔtwɔw so abantenten da.
17“Mede awerɛhow bɛba nnipa no so
na wɔbɛnantew sɛ anifuraefo,
efisɛ wɔayɛ bɔne atia Awurade.
Wobehwie wɔn mogya agu sɛ mfutuma,
na wɔn ayamde nso sɛ atantanne.
18Wɔn dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ
rentumi nnye wɔn nkwa
wɔ Awurade abufuw da no.”
Ne ninkutwe mu gya no
bɛhyew ɔman no nyinaa,
na ɔbɛma asase no so tefo nyinaa nkwa
aba awiei mpofirim.
AKCB : Sefania 1